FBC - Kaampaanonni hidhicha irratti qo’annoo geggeessan akka sagantaa yeroo ba’eefitti qorannucha geggeessaa akka jiran ibsame
Kaampaanonni hidhicha irratti qo’annoo geggeessan akka sagantaa yeroo ba’eefitti qorannucha geggeessaa akka jiran ibsame
Finfinnee, Bitootessa 11, 2009 (FBC) Hidha Haaromsaa Guddicha Itiyoophiyaa irratti qorannoo teeknikaa lama kaampaanonni geggeesan akka sagantaa yeroo ba’eefitti qorannicha geggeessaa akka jiran Ministirri Bishaanii, Jallisii fi Elektirikaa Doktar Injinar Silashii Baqqalaa ibsan.
Ministirichi Faanaa Biroodkaastiing Korporeetitti akka himanitti walakkeessa ji’a darbee jalqabee Itiyoophiyaa, Sudaan fi Ijipt akka waliigaltee irra qaqqabaniitti qorannuchi geggeeffamaa jira.
Gadhiisaa fi Hidhuu Hidha Haaromsaa Guddicha Itiyoophiyaa akkasumas hidhichi biyyoota yaa’a lagichaa gara-gadii irratti dhiibbaa hawaasummaa fi dinagdee inni geeessisu kaampaanota kanneeniin niqoratama.
Hojiin qorannuchaa yeroo qabameef keessatti geggeeffamaa akka jiru Doktar Injinar Silashii Baqqalaa beeksisaniiru.
Hojii hanga ammaa kaampaanota kanneenii irratti biyyoonni sadan dhihootti wal-arganii akka mari’atan ministirichi ibsaniiru.
Kaampaanota BRL fi Arteeliyaa jedhamaniin kan geggeeffamu qorannoon kun yeroo ji’oota 11 keessatti xumuramee biyyoota sadeeniif nidhihaata jedhamee eegama.
Bu’aan qorannuchaa ijaarsa hidhichaa irratti jijjiirama inni fidu akka hin-jirre kana dura ibsamuunsaa kan yaadatamudha. Balaay Tasfaayeetu gabaase.
Oduuwwan Biroo « Qorannoon magaalotatti wiirtuuwwan kilaastaraa industirii ijaaruu dandeessisu xumurame	Koorporeeshinichi qajeelfama kiraa manaarratti gatii kaffaltii sirreessuu isa dandeessisu qopheesse »